प्रेम सम्बन्ध मजबुत बनाउन अपनाउनुस् यी ७ तरीका – Lokpati.com
नेकपा केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध मृत्यु सरकार प्रचण्ड अमेरिका चितवन पक्राउ प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरी राशिफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस
प्रेम सम्बन्ध मजबुत बनाउन अपनाउनुस् यी ७ तरीका
By लाेकपाटी न्यूज On १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:१२
काठमाडाैं। प्रेम आफैंमा विना स्वार्थ चल्ने गर्दछ । तर कहिलेकाहीँ प्रेममा सुझबुझ र एक अर्काको भावना नबुझिदिँदा प्रेम टुट्ने गर्दछ । त्यसैकारण हरेक प्रेम सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहेको हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा महिलाको भावना कस्तो हुन्छ भनेर नजान्नाले पनि प्रेममा दरार आउने गरेकाे पाइन्छ । त्यसैले कोही पुरुष प्रेममा हुनुहुन्छ भने यी कुराको जानकारी राखेमा तपाईको प्रेमी तथा प्रेमिकासँगको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुने गर्दछ ।
प्रेम सम्बन्ध मजबुत बनाउन अपनाउनुस् यी ७ तरीकाः
२. हरेक प्रेमीका आफ्नो प्रेमीले आफूलाई स्वतन्त्रता दिउन् भन्ने चाहानछन् । उनिहरु आफ्नो बारेमा प्रेमी उदार हुन् भन्ने सोच्दछन् । तसर्थ, आफ्नी प्रेमीकालाई कुनै कुरामा बन्देज वा प्रतिबन्ध नलगाउनुहोस् ।
३. अधिकाशं महिलालाई साना कुराले पनि निकै प्रभाव पार्दछ । उनिहरु आफ्नो प्रेमीले प्रस्ताव गरेको, पहिलो पटक भेटेको लगायत अन्य दिनहरु सम्झिउन् भन्ने चाहन्छन् । तर, पुरुष भने यस्ता मिति खासै ख्याल राख्दैनन् । जसले कहिलेकाहीँ तपाईको प्रेमिकाको मन खिन्न बनाउने गर्दछ ।
४. हरेक महिला आफ्नो प्रेमीले सघाउन् वा साथ दिउन् भन्ने चाहान्छन् । कार्यालयको काम, शैक्षिक विषय वा घरायसी विषयमा पनि प्रेमीको साथ होस् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । यसतोमा सघाउने वा साथ दिनाले तपाईकी प्रेमिका तपाई प्रति निकै सकारात्मक बन्ने गर्दछिन् ।
५. के तपाईले आफ्नो प्रेमिकालाई कहिल्यै सरप्राइज दिनु भएको छ । सरप्राइज दिन कुनै महंगो वस्तु वा उपलब्धि चाहिँदैन । मात्र अरुले भन्दा फरक ढंगले उनलाई उपहार, कुनै निर्णय वा उपलब्धी सुनाउनु भयो भने यसले उनलाई सरप्राइज दिन सक्छ ।
६. प्रेम भनेको भावनामा निर्भर रहने गर्दछ । तर, कतिपय अवस्थामा यसलाई प्रकट वा देखिने गरी बुझाइनु समेत पर्दछ । तसर्थ, हरेक महिला आफ्नो प्रेमीले आफूहरु बिचको प्रेम प्रकट गरुन् वा देखाउन् भन्ने चाहन्छन् । जसले उनीहरु आफ्नो पुरुषका लागी महत्वपूर्ण छु भन्ने ठान्दछन् ।
७. कहिल्यै पनि आफ्नो प्रेमिकालाई अन्य महिला वा पूर्व प्रेमिकासंग तुलना नगर्नुहोस् । यसरी तुलना गर्नाले उनिहरु तपाईको नजरमा आफ्नो स्थान कम वा अरुको बढी छ भन्ने ठान्दछन् । तसर्थ, कहिल्यै पनि प्रेमिकालाई कोही कसैसँग तुलना नगर्नुहोस् ।
सिन्धुपाल्चाेकमा युवककाे विभत्स हत्या
एनआरएन अध्यक्षमा कुमार पन्त निर्वाचित